John Lithgow oo ku biirey jilayaasha dilaaga dayaxa ubaxa | Waxaan ka imid mac
Bartamihii May, wax-soo-saarku wuxuu ka bilaabmay filimka cusub ee Martin Scorsese: Dilaaga Dayaxa Ubaxa. Waxay u muuqataa in jilayaasha filimkan weli ma ahayn mid dhammaystiran, tan iyo maalmo ka hor waxaa ku soo biiray jilaaga ruug cadaaga ah Brendan Fraser. Laakiin, kaligiis ma ahayn, maadaama John Lithgow uu isna ku soo biiray mashruuca.
Sida laga soo xigtay Variety, John Lithgow ayaa ku soo biiray jilayaasha filimkan halkaas oo uu ka ciyaari doono doorka dacwad ooge. Brendan Fraser wuxuu ciyaari doonaa qareen. Waxay u muuqataa in jilayaasha filimka maxkamadda, Wali go'aan lagama gaadhin markii wax -soo -saarka la bilaabay.
Ugu yaraan taasi waa waxa aan ka fahmi karno labadii lagu daray ee u dambeeyay kooxda filimkaan, oo aan ka helno Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro iyo Lily Gladstone doorarka ugu muhiimsan.
Filimkan waa oo ku salaysan buugga aan khayaaliga ahayn ee isku magaca ah, oo uu qoray David Grann. Filimka waxaa la dhigay 1920 Oklahoma iyo Xafiiska Dambi Baarista Federaalka ee dhowaan la sameeyay ayaa baaraya dilalkii hantiilayaasha reer Osage ee la siiyay xuquuqda kirada ee shidaalka laga helay dhulkooda.
In kasta oo aysan jirin wax tafaasiil ah oo ku saabsan taariikhda la sii daayay filimka weli, haddana waxaan mar horeba aragnay a sawirka kowaad bishii May ee sanadkan kaas oo aan ku arki karno DiCaprio iyo Gladstone inta lagu jiro duubista. Maalmo kadib DeNiro ayaa shil galay intii uu filim qaadanayay taasi waxay ku khasabtay inuu ka maqnaado duubista dhawr maalmood.
Waxay u badan tahay, Apple waxay rabtaa inay sii deyso ka hor dhammaadka sanadka si ay u awooddo gal barkadaha Oscars Academy Hollywood 2022. Waxaa lagu xantaa in wax -soo -saarkan ay ku kici doonto khasnadaha Apple ku dhawaad ​​200 milyan oo doolar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » John Lithgow wuxuu ku biirayaa jilayaasha Killers of the Flower Moon